I-Semalt Expert Iyazi indlela yokufumana iziphumo zosesho zendawo
Ii-injini zophando zifumana ithuba lokuba amashishini anqwenela ukubiza inxalenye yendawo yokuzikhangela. Nangona kunjalo, ababenzi lula ukwenza nabo. Yisizathu sokuba bahlaziye ii-crawl algorithms zabo rhoqo kwaye batshintshe umboniso wosesho ngezikhathi ezithile. La maqhinga aqhelekanga athande ibhizinisi elincinci elizama ukufumana inzuzo ngokubhekiselele ekuhlaleni kwendawo - On Demand IT Solutions in portland. Izibhengezo ezihlawulwayo zilawula i-prime real estate kwikhasi lokuqala le-seo.search page ranking page.
Umsebenzisi we-SEO uye watshiswa ngabathengisi abanqwenela ukunciphisa iikona ngokusebenzisa amaqhinga amnyama kunye ukudibanisa isakhiwo amacebo apho kutheni i-Google ingenzi lula. Umntu akanakukusola ngokukwenza oko: bafuna ukugcina amakhasimende abo anelisekile.
Ngaphandle kokuba isayithi sibonakala kwikhasi lokuqala le-SERP, ngoko akukho nto ibhaliweyo eya kuzuza. Ibhizinisi elincinci elifuna ukwenza igama ngokwabo liza kukhangela kwelinye indawo uncedo. Amathuba kukuba abanalo uhlahlo lwabiwo-mali olwaneleyo ukukhuphisana namanye amaqela aphezulu alawula iziphumo zophando ngezithuthi zendalo.
Umphathi weNtengo yeNtengo ye-Digital (I-16) Semalt yeeNdijithali, i-Ivan Konovalov, ibonisa indlela ekudibanisa ngayo i-SEO efanelekileyo, kunye nokukhangisa ngokukhawuleza ngokukhawuleza, kunye nokujolisa ekukhangekeni kwendawo yokutshintshela ukhuphiswano. kunye ne-18 (injini) yokukhangela injini utshintsho.
Isicwangciso Sokukhangela Ukuhlawula Amashishini Amancinci
Kubantu abaqwalasela ukuthengiswa kweefayili ezihambelana nenkxaso yabo, kufuneka bahlawule ukuba badlale ukuba baza kubona nayiphi na iziphumo. Iifowuni zefowuni zithatha imiqulu emibili ukuze ubone iziphumo ze-organic. Ukuthengiswa ngokukhawulelana ngeyona ndlela ayiyona ndlela efanelekileyo yokuhamba ngokuthengisa kumashishini amancinci. Ukongeza kule nto, kuthatha ixesha elininzi kunye nezixhobo ngaphambi kokuba umntu abe nakho nayiphi na inqununu yezithuthi, ngakumbi ukuba ukhuphiswano luyanzima.
Isisombululo kukudibanisa i-SEO encinci, i-PPC kunye ne-tinge ye-flare yendawo eqinisekisa ukukhutshwa kwazo zonke iinzame kunye neziphumo. Amanyathelo alandelayo achaza indlela yokwenza oku:
# 1 Buyekeza idatha
Qinisekisa ukuba onke amagama angundoqo asetyenziswayo asesikhathini. Zisebenzise ngamagama angundoqo okupasa ifom yewebhusayithi, kwaye ezo zibikwe kwizinga eliphezulu ukusuka kwi-Google Analytics, kunye nezinye izixhobo ezifana ne-Search Console, kunye ne-Adwords . Ukusebenzisa isixhobo esinjengeSpyFu, qhathanisa ukuba la magama angundoqo aphathelene njani neengxelo ezivela kumashishini.
# 2 Misela iBhajethi
Umyinge weendleko ngokukhawuleza ukwazisa malunga nokuba yeyiphi enye eya kuchitha ixesha eli phulo.
# 3 Fumana iNgingqi
Ngolwazi oluqokelelwe ngamagama angundoqo, udibanise kunye nezikhombisi zendawo kuzo zonke iinkalo ezisebenza kuyo. Ukusebenzisa iikhankaso zesikhangiso esikhokhelwayo:
Yenza amaqela ekukhangisa okujoliswe kuyo kwindawo nganye
Faka iifayile eziyingqayizivele kwindawo ewanikwayo
Izandiso zee-AdWords zokufowunela ezibandakanya amagama angundoqo
Bhala umxholo wesikhangiso oqinileyo oza kuqonda kuphela abantu
# 4 I-PPC kunye ne-SEO
Jonga i-PPC yendawo ukuze ubone oko kusebenza kwintengiso ye-organic, kunye neyasebenza kwi-SEO. Ukuba neqoqo elichanekileyo lamagama asemqoka, kuba lula ukuzixuba kulabo abaphumeleleyo ukuhlawulwa, kunye ne-organic.
Akusikho uhlahlo lwabiwo-mali oluqulunqa ukuba ishishini elincinci liza kubeka kwi-SERP. Kunoko, ukusebenzisa isicwangciso esisebenzayo esibandakanya i-SEO, i-PPC kwaye ilungiselele ukuba bobabini baqinisekisa isikhundla kwizinga eliphezulu.